Isticmaalayaasha Japan, Switzerland iyo Taiwan hadda waxay ku bixin karaan iibsashada iTunes iyaga oo adeegsanaya biilka taleefanka | Wararka IPhone
Mar kasta oo qof abuuro xisaab Apple, shuruudaha waxaa ka mid ah in lagu daro lambarka kaarka deynta si marka aan wax u iibsanno, ay si otomaatig ah nooga qaadaan. Laakiin wadamada qaarkood, inbadan iyo in ka badan, Apple waxay badaleysaa habka aan wax uga iibsan karno iTunes. Apple waxay ikhtiyaar u leedahay hawl wadeenada taleefanada inay mas'uul ka noqdaan biilka macaamiisha mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah iibsiyada ay adeegsadayaashu ku soo mariyaan aaladooda. Wadamadii ugu dambeeyay ee horeyba uheystay qaabkan cusub ee lagu bixiyo waxka iibsiga Switzerland, Taiwan iyo Japan.Laakiin iyagu keligood maahan, tan iyo Apple waxay wadahadalo kula jirtaa shirkadaha kala duwan ee Ruushka iyo Jarmalka si aad ugu soo bandhigto muuqaalkan dadka isticmaala wadamadaas dhawaan. Muuqaalkan waxaa hadda laga heli karaa shan dal, oo ay ku jiraan Taiwan, Switzerland, iyo Japan. Xulashadani ma aha oo kaliya inay u oggolaato dadka isticmaala inay bixiyaan wax kasta oo ay ku iibsadaan iTunes, laakiin sidoo kale waxay u oggolaaneysaa inay bixiyaan adeegga bil kasta ee adeegga Apple Music Sidan oo kale, wax iibsi kasta oo aan sameyno, ha ahaato muusig, buugaag, taxane TV, codsiyo ama buugaag, waxaan awoodi doonnaa inaan dib u dhigno bixinta illaa dhamaadka bisha ama marka hawlwadeenku noo soo bandhigo qaansheegta bangiga.
Tani waa ikhtiyaar ku habboon dhammaan adeegsadayaashaas, iyadoon loo eegin shirkadda codsatay kaarka deynta, Iyagu ma kalsoonaan gabi ahaanba waxayna doorbidaan inay bixiyaan lacag bixinta inta ay nool yihiin, Iyada oo loo marayo koontada jeegga bangiga iyo haddii ay sidoo kale la socoto biilka taleefanka, dhammaantood way fiicnaanayaan. Waqtigaan la joogo ma ogin in Spain iyo wadamada kale ee Latin Amerika uu jiro hawl wade xiisaynaya inuu adeegyadan u fidiyo adeegsadayaasha, maadaama kootada yar ee Apple ku leedahay dalalkan ay u badan tahay inaan waligeen ku raaxeysan doonin tan. ikhtiyaar
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Isticmaalayaasha Japan, Switzerland iyo Taiwan waxay hadda ku bixin karaan iibsashada iTunes iyagoo adeegsanaya biilka taleefanka
Waxaan doonayay isla isla sanadkii 2008 maanta x maanta ayaa i siisa iwal
iPhone 7, oo aan ahayn 6SE, ayaa noqon doona magaca iPhone-ka cusub, sida uu sheegayo Macotakara